Faah faahin kasoo baxaysa qarax ka dhacay magaalada Muqdisho iyo qasaaraha ka dhashay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin kasoo baxaysa qarax ka dhacay magaalada Muqdisho iyo qasaaraha ka dhashay
Waxaa faah-faahin dheeraad kasoo baxaysaa qarax saqdii dhexe ee xalay ka dhacay jidka warshadaha, gaar ahaan agagaarka dhismaha Jaamacadda SIMAD ee magaalada Muqdisho, iyadoona qaraxaasi laga maqlayay qeybo badan oo magaalada ka mid ah.
Qaraxaasi oo saqdii dhexe xalay si weyn looga dareemay qeybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa inuu ka dhashay miino ay aasayeen rag la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin Xarakada Al-shabaab.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta Bulshoweyn u xaqiijiyay in raggii aasayay miinada ay qaraxeeda ku geeriyoodeen, kuwaas oo tiro ahaan lagu sheegay inay ahaayeen illaa seddax qof oo jirkooda iyagoo go’goay lagu arkay goobtii uu qaraxa ka dhacay.
Ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa howlgalo baaritaano ah halkaasi ka sameeyay, mana jirto cid baaritaanadaasi lagu soo qab-qabtay.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii u horeeysay oo qarax ceynkaan oo kale ah ay ku dhintaan dadkii aasayay oo ka dhaca magaalada Muqdisho iyo qeybo ka mid ah gobolada dalka, iyadoona dhowr jeer hore ay magaalada hore uga dhaceen qaraxyo ay dadkii aasayay ku geeriyoodeen.